विज्ञान/प्रविधि Archives - Citypokhara
आज मे २ अर्थात सूचना तथा प्रविधि दिवस धेरैलाई थाहा हुन सक्छ वा नहुन पनि यो दिवस बारे । तर, बुझेर होस वा नबुझेर आम आधुनिक जीवनको मानिस यो क्षेत्रबाट टाढा रहन सक्ने अवस्था भने छैन् । आज सुचना र प्रविधिको मानिसको एक अभिन्न अंगको रुपमा विकास भइसकेको र चाहेर पनि यो क्षेत्
फेसबुकमा आयो अहिलेसम्मकै गम्भीर समस्या
२०७५ फागुन ३० , बिहीवार March 14, 2019 by Citypokhara.com
एजेन्सी । सामाजिक सञ्जल फेसबुकमा अहिलेसम्मकै गम्भीर समस्या आएको छ । विश्वभर फेसबुक प्रयोगकर्ताको एकाउन्ट खुलेका छैनन् र खुलेकाले पनि राम्रोसँग काम गरेका छैनन् । फेसबुकसँगै इन्स्टाग्राम तथा ह्वाट्सएप पनि डाउन भएका छन् । बुधबार रातिदेखि समस्या देखिएको हो । केही �
२०७५ फागुन २३ , बिहीवार by Citypokhara.com
पोखरा । ‘क्लियर टिभी’ले ग्राहकहरुका लागि ‘भ्वाइस कमान्ड डिभाइस लञ्च’ गरेको छ । पोखरामा टिभीको बजारिकरण गरिरहेको कम्पनी पोखरा इन्टरनेटले जारी ‘क्यान इन्फोटेक’ मेला नयाँबजार प्रदर्शनीकेन्द्रमा यो ‘डिभाइस’ प्रदर्शनमा राखेको छ । ‘अमेजन अलेक्सा’ले तयार पारेको यो
२०७५ फागुन २१ , मंगलवार by Citypokhara.com
पोखरा । कम्प्युटर एसोसिएसन महासंघ (क्यान) कास्कीद्वारा आयोजित दसौं संस्करणको क्यान इन्फोटेकमा रोबोर्ट प्रतिस्पर्धा भएको छ । पश्चिमाञ्ल इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीले निर्माण गरेका ट्रयाकर रोबार्टबीच प्रतिस्पर्धा भएको हो । प्रतिश्पर्धामा निश्चल दाहाल, आकाश
२०७५ फागुन २० , सोमबार by Citypokhara.com
पोखरा । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघ कास्की शाखाले आयोजना गरेको दशौं संस्करणको ‘क्यान इन्फोटेक’को सोमबार सुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिना तथा कानुनी व्यवस्थामन्त्री हरिबहादुर चुमानले इन्फोटेकको उद्घाटन गरेका हुन् । उक्त अवसरमा बोल्दै उन
२०७५ फागुन १६ , बिहीवार by Citypokhara.com
पोखरा। कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघ कास्की शाखाद्वारा आयोजित ‘भायनेट क्यान इन्फोटेक–२०१९ इन एशोसियसन विथ आइएमई पे’ दुई दिन पछि सरेको छ । फागुन १८ गते शनिबारबाट सञ्चालनको तयारीमा रहेको इन्फोटेकलाई फागुन २० गतेदेखि गर्ने गरी समय परिमार्जन गरिएको क्यान
२०७५ फागुन १३ , सोमबार by Citypokhara.com
पोखरा । क्यान इन्फोटेकमा मावि स्तरीय आइटी क्विज प्रतियोगिता हुने भएको छ । फागुन १८ देखि २४ गतेसम्म पोखराको नयाँबजारस्थित प्रदर्शनी केन्द्रमा हुने क्यान इन्फोटेकका अवसरमा रनिङशील क्वीज प्रतियोगिता हुन लागेको हो । सहभागी हुन इच्छुक विद्यालयहरुले फागुन १७ गतेसम्
२०७५ फागुन १ , बुधवार by Citypokhara.com
पोखरा । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघ कास्की शाखाद्वारा आयोजित ‘भायानेट क्यान इन्फोटेक–२०१९ इन एसोसिएसन विथ आइ.एम.ई पे’मा राखिने स्टलमध्ये ७५ प्रतिशत बुकिङ भएका छन् । बाँकी स्टल पनि बुकिङ हुने क्रम जारी रहेको स्टल व्यवस्थापन उपसमिति संयोजक तीर्थराज सुव
२०७५ माघ २० , आईतवार by Citypokhara.com
पोखरा । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघ कास्की शाखाद्वारा आयोजित ‘भायानेट क्यान इन्फोटेक–२०१९ इन एसोसिएसन विथ आइ.एम.ई पे’को तयारी तिब्र बनाइएको छ । कार्यक्रमलाई सफल पार्न विभिन्न संघसंस्थाले साथ दिने क्रम जारी रहेको क्यान कास्कीका सचिव विकास भुर्तेलले ज�
फेसवुक चलाउँनुहुन्छ? होसियार ! पाँच करोड फेसबुक प्रयोगकर्ताको डाटा ह्याक
२०७५ असोज १३ , शनिबार by Citypokhara.com
काठमाडौं । सामाजिक सन्जाल फेसबुकको डाटा फेरि चोरी भएको छ । करिब ५ करोड प्रयोगकर्ताको डाटा चोरी भएको फेसबुकले जनाएको छ । ह्याकरले ह्याक गरेर डाटा चोरी गरेको हो । फेसबुकका अनुसार यसको आन्तरिक जाँच भइरहेको छ । कम्पनीका अनुसार ह्याकरले ‘भ्यू एज’ फिचरमा हमला गरे । यसै�